Ogadentoday Press » Jigjiga: Xog- Yaa ka danbeeya Weerarada Gabdhaha loo gaysanayo
(Ogadentoday Press)- illaa intuu is baddalka Siyaasadeed ka curtay Deegaanka Soomaalida ayaa waxaa sii badanayaa dhacdooyin lagu weerarayo Dumarka qaba asmaato muujinayaa Taageerida Ururka ONLF loo hayo.
Haddaba yaa ka danbeeya arrimahan?
Baadhitaan dheer oon bilaabnay maalmo ayaa waxaan ku soo xaqiijinay in arrimahan ka danbeeyaan labbo Koox oo hoos ka wada shaqaysa koox ku dhow Madaxweynaha KMG Mustafe Maxamed Cumar oo ogayn howlaha ku jiraan Iyo Koox laga maamulo Addis Ababa oo Siyaasiyiin ku suggan Addis Ababa ku xidhan kuwaas doonayaa in Maamulkan Fashilmo.
Kooxdan waxaa Unugyo ka samaysteen Magaalada Jigjiga waxaana kooxan sheegtaan inay yihiin Dulmidiid! Waa dhalinyaro Qurbaha ka tagtay gaar ahaan Dalalka, Sweden, London Iyo Canada una baddan dadka deegaanka Jigjiga deggan waaxana adeegsanayo kalle.
Dhalintan Magacyadda Ururo Iyo Beello ayay ku howl galaan waxayna sheegtaan in Ururka ONLF hadda kahor dad ka dilay waxaana qaarkood Baraha bulshada ka waddaan olole abuura karra khatar Siyaasadeed iyo mid Deegaanba.
Maamulka Kililka Cusub waa in arrimahan soo noqnoqdaa ee amni darida ah tallaabo waafaqsan sharciga la mariyo. Dowladu waa inay xaqiiqsataa in haddii aan sharciga laga cabsan meeshu noqonayso fowdo iyo khatar.